Saif Ali Khan oo Xabsi loo taxaabay kadib markii uu feeray Ganacsade (Daawo Sawirada) - iftineducation.com
iftineducation.com – Saif Ali Khan ayaa xabsiga loo taxaabay kadib markii uu dagaal ku galay star hotel oo uu deganaa habeenkii taladada ee aynu soo dhaafnay kadib markii Ganacade Iqbal Sharma oo fadhiya miis u dhawaa Aktarka u sheegay in uu hoos u hadlo uuna dhimo dhawaqiisa.
Booliiska ayaa waxay fureen Kiis dacwad ka dhana loogu furayo Jilaagan kaasoo ay fureen Ganacsade kasoo jeeda dalka India balse heysta dhalasho South African ah oo ay dhexmaray gacan kahadal iyaga iyo Saif Ali Khan sida ay sheegtay Bbc da .
Goor dambe ayaa lagu soo daayay Jilaaga lacag dhan 15,000 rupees ($304; £194).iyadoo ay arintaasi ka xumaadeen qaar ka mid ah asxaabtiisa iyo jeceylkisa Kareena Kapoor,booliiska ayaa sheegay in Iqbal Sharma oo ah ninka uu gacankahadalka dhexmarey isaga iyo Saif Ali Khan lagu dabiibayo Cisbitalka waxaana uuna ka jabay sanka.
Sanadii 2008 dii ayaa waxaa Kiis laga furay SaiF Ali Khan kaidb markii uu Aflagaado u geystay Wariye tani waxay noqonaysa Kiiskii labaad ee laga furo Aktarkan balse waxa uu hada Booliiska u sheegay in uu is difaacayay.
Khan waxa uu jilay in kabadan 40 Filim tan iyo markii uu kusoo biirey Boolywoodka waxaana dhawaan lagu soo eedeeyay inuu caayay Filim Sameeye lagu magacaabo Shirish Kunder mar uu Qamri ka dhargay.